Heesu in Class 2 nkezi 4.5 / 5 si 10
NA / A, o nwere ihe nlere 22.6K
Ndụ akwụkwọ, Shounen Ai, Weebụ, Yaoi
Wa nke Heesu gbara gburugburu Chanyoung, ezigbo enyi ya na nzuzo. Ọ naghị eche echiche ịja Chanyoung mma n'akụkụ ma ọ bụ ige ntị na nsogbu ụmụ agbọghọ ya niile. Ọ chọghị ịma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ maara naanị ya dị ka "enyi Chanyoung." Otu ụbọchị, Heesu bido nụ aha ya ebe niile. Na bọs, n'ụlọ nzukọ, n'oge nri ehihie… tụgharịa, enwere asịrị na-aga ụlọ akwụkwọ (Enwere nsogbu ịhụnanya? Chọta Heesu na klas 2 na ọ ga - agwa gị ihe ị ga - eme!) Na nke ahụ, Heesu na - ahụ onwe ya na mberede etiti nke uche. Ma olee otú ọ pụrụ isi nye onye ọ bụla ndụmọdụ? Ọ maghịdị ihe ọ ga-eme gbasara anwụrụ ya!
Isi nke 89 Finale April 2, 2021
Isi nke 79 Ọgwụgwụ April 2, 2021